Ihe kpatara na akara ule ụmụaka abụghị ihe kacha mkpa | Bezzia
Ihe kpatara na akara ule ụmụaka abụghị ihe kacha mkpa
Nke Torres | 25/05/2022 20:00 | Ndị nne ndụmọdụ
Mgbe afọ akwụkwọ ọhụrụ na-achọ akwụsị, ọ bụ oge ịnata na nyochaa akara ule a na-atụ ụjọ, akara ule ndị ahụ. Ha nwere ike mebie ùgwù onwe onye nke ụmụntakịrị ọ bụrụ na enwetaghị ha nke ọma. N'ihi na otu ọnụ ọgụgụ, ọnụ ọgụgụ dị mfe jikọtara ya na isiokwu, ezughị iji chọpụta ihe mgbalị a mere n'oge ọmụmụ.
Ònye ọzọ na onye na-erughị agafewo nhụjuanya nke ịgba chaa chaa ihe niile na otu ndetu, ihe bụ n'ezie na-ezighị ezi, karịsịa mgbe ọ na-abịa ụmụaka. N'ihi na nsonaazụ nke ule anyị ga-agbakwunye mgbalị a na-eme, awa ọrụ n'ụlọ, ịchụ àjà nke ịhapụ ihe ndị ọzọ na-atọ ụtọ iji rụọ ọrụ na ihe omume ụlọ. Mgbalị nke ọtụtụ ọnwa nke enwere ike ileda ya anya ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị akara ule ikpeazụ ka etinyere n'uche.
1 Ihe ndetu abụghị ihe kacha mkpa
1.1 Gịnị ka ihe ndetu na-ekwu banyere àgwà ụmụ akwụkwọ
1.2 Ụzọ ahụ dị mkpa karịa ihe mgbaru ọsọ
Ihe ndetu abụghị ihe kacha mkpa
Ọ bụ ezie na ha dị mkpa iji nyochaa ụmụaka, akara ule abụghị ihe kacha mkpa n'ihi na n'ọnọdụ ole na ole ha na-egosipụta ezi mbọ nwa akwụkwọ ahụ na-agba. Iji ruo akara ule ikpeazụ, ị ga-agafe ọtụtụ ụbọchị ọmụmụ, ọtụtụ ihe mmụta ndị a na-aghọtachaghị nke ọma mgbe ụfọdụ. Ụbọchị nke ụmụ akwụkwọ na-anọghị na-enweghị uche, na isi ha na ihe ndị ọzọ, na-eto eto, na-azụlite àgwà ha, na-enweghị ike ileghara ọmụmụ ihe ha anya.
N'ime ọnwa ndị ahụ, ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ na-etinye oge dị ukwuu iji kwadebe na ịmụ ihe na mgbe ụbọchị ule ahụ rutere, ha na-egwu ihe niile n'otu kaadị. Ihe na-ezighị ezi, n'ihi na n'ụbọchị ahụ, ha nwere ike na-atụ ụjọ karị, na ịta nsogbu, ha nwere ike na-ehi ụra nke ọma ma ọ bụ nanị amaghị otú e si mepụta udomo oro. Y na ọkwa ha nwetara, anaghị egosipụta mgbalị ahụ niile ma ọlị nke n'ọnọdụ ahụ na-enweghị ụgwọ ọrụ kwesịrị ya.
N'ihi ihe ndị a nile, akara ule ụmụaka abụghị ihe kacha mkpa. Ha bụ naanị ụzọ isi chịkwaa mmụta site na usoro dị mfe nghọta n'etiti nne na nna na ndị nkuzi. Ọ dịghịkwa njọ ụmụaka ịghọta nke ahụ ọkwa ọjọọ bụ ajọ nsonaazụ, na ha aghaghị ịrụ ọrụ iji meziwanye ya na ịkụziri ha ụzọ kasị mma isi mee ya.
Gịnị ka ihe ndetu na-ekwu banyere àgwà ụmụ akwụkwọ
Ihe ndetu ụmụ akwụkwọ nwere ike inyere gị aka ịmụta ọtụtụ ihe gbasara àgwà na ntolite nwa gị. Karịsịa n'ihe banyere ụmụ nwoke na-eto eto bụ ndị na-amalite ịmalite mmekọrịta mmekọrịta ha, inwe mmasị nke onwe ha ma na-aga n'ụzọ nke ọdịnihu ọkachamara ha ga-abụ. Nwatakịrị nwoke na-ebute akwụkwọ dị elu mgbe niile, nwere ike igosi nsogbu nke oke mgbatị ahụ. Ọ naghị etinye oge na ihe ndị ọzọ, ọ naghị eso ndị enyi ya aga, ọ naghị emekọrịta ihe, ndị a bụ naanị ụfọdụ ihe atụ nke okwu a na-aghaghị ịchịkwa iji gbochie ụmụaka inwe nsogbu metụtara ọmụmụ ihe.
N'aka nke ọzọ, nye ndị ọkachamara, ihe ụfọdụ ndetu na-ekwu banyere ihe ndị a ma ama na-ekwu, na-egosi na nwa akwụkwọ ahụ na-arụ ọrụ, na-amụ ihe iji na-amụ ihe. Ma ha na-egosikwa na ị nwere nchegbu ndị ọzọ, na ị na-etinye oge na-arụ ọrụ ndị ọzọ, na ị nwere ihe ntụrụndụ na ndụ ọha mmadụ. N'ezie, nwa akwụkwọ ahụ nwere ndụ nkịtị nke ọmụmụ bụ akụkụ bụ isi, ma ha adịghị eche na ọ dị ihe na-asọ oyi.
Ụzọ ahụ dị mkpa karịa ihe mgbaru ọsọ
Ụlọ akwụkwọ bụ ọrụ ụmụaka, ọ bụ ọrụ ha ịmụta ọtụtụ ihe na ịzụ ka ha nwee ezigbo ndụ okenye. N'agbanyeghị ụzọ ha na-ahọrọ, ma ọ bụrụ na-amasị ha ọmụmụ ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụrụ na ha enweghị ọchịchọ ịgụ akwụkwọ na mahadum ma ọ bụ nwee ọrụ ọkachamara. Agụmakwụkwọ bụ akụkụ dị mkpa nke mmepe ụmụaka ha kwesịkwara ịma ya.
Ma echiche ekwesịghị ịhapụ n'akụkụ, ezigbo uru nke nwa ahụ, nke bụ mgbalị, ọrụ a na-eme, ọchịchọ imeziwanye na ịchọ ka ọ dịkwuo mma mgbe niile. Mgbalị ahụ nile bụ ihe ndị nne na nna kwesịrị iji kpọrọ ihe mgbe ha gwụchara. N'ihi na ụzọ dị mkpa karịa ihe mgbaru ọsọ ya mere, akara ule ụmụaka abụghị ihe kacha mkpa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ndị nne » Ndị nne ndụmọdụ » Ihe kpatara na akara ule ụmụaka abụghị ihe kacha mkpa
Oke oghere na mmekọrịta di na nwunye
Chọpụta akwụkwọ akụkọ Massimo Dutti ọhụrụ: Site n'ìhè